डिप्रेसन किन हुन्छ ? - Kamana News
बिहानै उठेर आफ्नो नित्यकर्म गरेर कलेज जाने तरखर गर्दै थिए । कलेजबाट फोन आयो र मैले रिसिभमात्र के गरेको थिए उताबाट म्यामले कलेज बिदा छ भनेर सुचना दिन कल गरेको भन्नुभयो । त्यस दिन सोमबार थियो भने कुनै त्यस्तो विशेष चाडपर्व पनि नरहेकोले मैल उहाँलाई सोध के कारण हो र म्याम बिदाको । उहाँको जवाफ रहेको थियो एक विधार्थी को आत्महत्या र यस कारण कलेज भोलीदेखी मात्र लाग्नेछ र फोन राख्नुभयो । यो संवाद करिब १ मिनट र ११ सेकेन्डको थियो तर यस विषयले भने मलाई मर्माहित बनायो ।
विभिन्न साथीहरुसंग यस विषयमा छलफल गर्न भेला हुने सल्लाह गरी करिब दिउँसोको २ बजे भेटी, आत्महत्या मानिसले किन गर्छ र यसको लागी हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ , आफू लगायत आफ्नो घर परिवार, छरछिमेकीलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा छलफल पनि गर्यौँ । आत्महत्याको सबैभन्दा ठूलो कारण डिप्रेसन हुने गरेको छ ।
अहिलेको व्यस्त जीवनशैलीमा यो शव्द प्राय सबैको प्रयोगमा रहेको हुन्छ भने कोही न कोही डिप्रेसन भएको मानिस हामीले आफ्नै आखाले देखेकै हुन्छौँ । विभिन्न अनुसन्धानहरुले यो समेत देखाएको छ कि १५ प्रतिशत मानिस डिप्रेसनको सिकार भएको हुन्छ । कुनै न कुनै रुपमा उनीहरु डिप्रेसड भएका हुन्छन् ।
यो रोगका कारण धरै जना मानिसले आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाउने, जीवन बिगार्ने, कुलतमा फस्ने , आफ्नो भविष्य नै अन्धकार बनाउने तथा आत्महत्या नै समेत गर्ने गरेको हुन्छ । एउटा तथ्याङक अनुसार १५ प्रतिशत डिप्रेसनको सिकार भएका मानिसले आत्महत्या गर्ने गर्छन् । त्यस्तै पुरुषमा भन्दा महिलाहरुमा डिप्रेसन बढी भएको पाईएको छ ।
के हो त डिप्रेसन?
डिप्रेसन एक किसिमको मानसिक रोग हो । यस रोगको लक्ष्ण मानिस अनुसार फरक हुन सक्छ । डिपे्रसन भएको नभएको कसैको अनुहार हेरेर थाहा पाउन सकिदैन । जबसम्म यस किसिमको रोगको लक्ष्ण देखाउदैन तबसम्म यो रोगको सिकार भएको थाहा हुदैँन । केही दिन अगाडीसम्म राम्रो मानिसमा पनि यो देख्न सकिन्छ । धेरै चिन्ता, मानसिक तनाबले यो रोगको रुप लिन थाल्छ । मनमा कुराहरु लकाउने , कसैसंग आफ्नो तनाबको बारेमा छलफल नगर्ने तथा मनमा कुरा खेलाई राख्ने व्यक्ति छिट्टै डिप्रेस्ड हुने गर्छ ।
अहिलकोे समयमा यो एक यस्तो रोग बनेको छ जुन लागेपछि मानिसको जीवन नै नकरात्मक बनाईदिन्छ । यो रोग कुन बेला कसलाई लागछ भन्ने थाहा नै हुदैँन । अपत्यारो रुपमा यो रोगको बिकृति रहेको छ । समयमा सचेत नबने र आफ्नो जीवनप्रति ध्यान नदिए स्वयम् डिपे्रसनमा जाने चान्स बढ्छ । डिप्रेसन हुने कारण सबैको फरक भएता पनि यसको लक्षण भने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाली समाजमा यस रोगको बिरामीलाई पागल भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ तर यो कुरा गलत हो किनभने मानिसको जीवनमा तल माथि हुदाँ छोटो समयको लागी डिपे्रसन हुन सक्छ तर चिकित्सकलाई समय समयमा भेटेर आफ्नो कुराहरु साट्ने र कस्तो के हुन्छ जस्ता कुराहरु भन्नाले पनि मन हल्का हुने गर्छ । चिकित्सकहरुले यस्ता रोगहरुबाट बचाउन विभिन्न अध्ययन गरेका हुन्छन् ।
डिप्रेसनका केही प्रमुख लक्षणहरु
एक्लै मात्र बस्न मन लाग्ने
जतिबेला पनि नकरात्मक कुरा गर्ने
जीवनप्रति कुनै आशा नरहेको
मानिससंग गासिन नचाहानु
रिस उठ्नु, बढी झर्किनु
एकान्तवास मात्र मन पर्नु
डिप्रेसनका केही प्रमुख कारणहरु
घरपरिवार, प्रेमी वा प्रेमिका वा जीवन साथीसंगको मनमुटाब
असफलता वा कसैप्रतिको धेरै लोभ गर्ने बानी
मिहिनेत भन्दा बढी अपेक्षा
डिप्रेसनका केही प्रमुख उपचारहरु
जीवन एक अमूल्य उपहार हो त्यसैले खुसी र सन्तुष्टकासाथ बाचौँ ।
बिहिवार, माघ ८ २०७७०५:१८:०१